Ihe pụtara n'ụzọ nkịtị: "Sathya" pụtara "eziokwu." Sai Baba "pụtara" nne / nna nke Chukwu. "
Onye guzobere: Sathya Sai Baba
Ụbọchị ọmụmụ: November 23, 1926
Ebe ọmụmụ: Puttaparthi, South India
Afọ a tọrọ ntọala: Sathya Sai Baba kwupụtara ozi okpukpe ya na October, 29, 1940.
Akwụkwọ Nsọ ma ọ bụ asọpụrụ: Sai Baba na ndị na-eso ụzọ ya na-agụ ma na-amụ Koran, akwụkwọ okpukpe ndị Alakụba, ma nke ka mkpa, ha na-agbaso ihe odide sitere na Vedas. Vedas bụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ oge ochie nke nwere akụkọ anọ nke ndị ọhụụ dere. (Murphet, 1978: 288) The Upanishads, akụkọ okpukpe na Vedas, na Puranas, mgbakwunye na Vedas, na ọtụtụ akwụkwọ ndị ọzọ na-emetụta ozizi nke Sai Baba. Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ndị a na-ejikọta isiokwu dịgasị iche iche site na mgbalị okpukpe, akụkọ ifo banyere chi, nkà ihe ọmụma, akụkọ ihe mere eme, nkwekọrịta ndọrọ ndọrọ ọchịchị, na-atọ ụtọ akụkọ banyere okpukpe, na akụkọ ndị ọzọ na-emesi nrara nye Chineke. (Rigopoulos, 1993: 261-263)
Size nke Group: Na 1993, Rigopoulos kọrọ na e nwere ihe dị ka nde mmadụ iri. (p. 377) Taa, e nwere ụlọ ọrụ 1,200 Sai Baba maka ịkwalite okpukpe na 137 dị iche iche mba. Ebe ọzọ na-ekwu na e nwere ihe karịrị 6500 Sai Baba Centres na mba dị iche iche. Ntugharị ole na ole dị ka Narayana Baba mere ọtụtụ njem na Europe na United States iji gbasaa ozi nke Sai Baba. Okposụkedi emi enye mîkọfiọkke ke United States, nsụhọde nsụhọde emi ẹkpepde ediwak ukpepn̄kpọ eke spirit. (Rigopoulos, 1993: 375)
N'oge na-adịbeghị anya, na 1967, e nyere nkuzi na Sai Baba na Mahadum California ma nwee mmasị na otu a malitere. N'ime oge 1970, usoro ije a toro ma Melton na-akọ na ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke otu na North America, ọkachasị United States. Na mgbakwunye, otu ndị Sai Baba guzobere ntọala SAI na California ma ha na-ebipụta akwụkwọ akụkọ Sathya Sai. (Melton, 1996: 868)
Ezinụlọ Shirdi Sai Baba bụ ndị kwere na ọdịnala Hindu; aha mbụ ya bụ Sathya Narayan Raju. N’oge na-adịghị anya a mụsịrị ya, akụkọ mgbe ochie na-ekwu na ihe ịtụnanya malitere ime n’ụlọ ya dị ka ngwa egwu na-akpọ naanị ha na agwọ agwọ na-apụta n’akụkụ nwatakịrị ahụ, na-emeghị ya ihe ọ bụla.
Mgbe ọ dị afọ iri na anọ, Sathya Narayan Raju kwusara na ọ bụ onye nnabata nke Sai Baba nke obodo Shirdi ma malite n'oge ahụ, ọ gara n'aha ahụ. Onye Baba mbu a, nwoke di nso na onye oru ebube, mere ntọala maka otu ndi Hindu na ndi Hindu wee nwee ike imuta omenala Hindu ma mesie ufodu ederede. Tupu ya anwụọ na 1918, ọ kwusara na a ga-amụghachi ya mgbe afọ asatọ gasịrị; A mụrụ nna nke abụọ bụ Baba Baba mgbe afọ asatọ gasịrị. Ya mere, ugbu a, Sai Baba ga-anọgide na-arụ ọrụ ya nke na-eme ka ndị mmadụ laghachikwuru Chineke ma na-agba ha ume ka ha na-eduzi ndụ omume nakwa ka ha wue ụwa nke dabeere na udo (Robinson, 1976: 4-9).
Sathya Sai Baba kwenyere na ọ bụ nlọghachi nke Shirdi Sai Baba, onye nwụrụ afọ asatọ tupu a mụọ Sathya Sai Baba na onye buru amụma banyere ọmụmụ Sathya Sai Baba. O kwenyesiri ike na otu Chineke ma gbaa ndị ọzọ ume ime nke ahụ site na ntinye. Ọtụtụ n'ime echiche ya dabere na ọdịnala Hindu mana ọ na-ewere ụzọ dị irè karị; ọ kọwakwuru ihe ndị gbara ya gburugburu na-agụnye ịrụ ọrụ nsọ na inyere ụwa aka. Ya mere, ya na ọtụtụ ndị na-eso ụzọ ya na-arụ ọrụ afọ ofufo na India na mba ndị ọzọ. N'okpuru ebe a bụ nkọwa ndị ọzọ banyere nkwenkwe ya.
Nraranye nye Guru na Chineke
Na ọdịnala Sai Baba, e nwere naanị otu ezi Chineke n'agbanyeghị na ọtụtụ aha ya bụ Allah: ndị Alakụba, Krishna ma ọ bụ Vishnu ndị Hindu, ma ọ bụ Onyenwe anyị na-akpọ ya. Ọ dịghị mkpa ihe ndị mmadụ na-akpọ ya ma ọ bụrụhaala na ha kwenyere na ya n'ihi na onye na-ekweghị n'okwukwe bụ ihe ọjọọ. N'ihi ya, Sai Baba nabatara okpukpe nile ma na-agba ume ịdị n'otu n'agbanyeghị na ọ na-ewekarị echiche ya site na Hindu.
Guru bụ Sanskrit (asụsụ India n'oge ochie) okwu pụtara onye nkụzi. N'okwu a, Sai Baba bụ onye nkụzi nke na-edu ndị na-eso ụzọ ya n'ụzọ Chineke. Ndị na-eso ụzọ ga-etinye aka ma jide ntụkwasị obi na Guru. Ha ga-enyekwa puja, onyinye okpukpe dịka nri, nye Chineke. E nwere ọganihu ime mmụọ, ma ọ bụ njikọ nke guru na onye na-eso ụzọ, na usoro Bhakti; Bhakti bụ mgbe Chineke na-agwa onye na-efe ofufe okwu na onye na-etinye aka na ịhụnanya site n'inye onwe ya naanị Chineke. Sai Baba bu Chineke nke bu Chineke, dika anyi nile bu, (obugh Chineke n'onwe ya) choro ibu onye ozo no n'ime usoro a. Ikwenye Chineke bu ihe di oke mkpa ma o nwere ike ibia n'uzo di iche iche. Ụdị ahụ bụ:
Na-edegharị aha Chineke, ma ọ bụ mantras, ọtụtụ ugboro.
2) Na-agụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ ma ọ bụ na-ege ntị n'okwu omume okpukpe.
3) Ikwe ukwe nke Chukwu n’eme ihe banyere uru ya.
4) Ntụgharị uche miri emi ma ọ bụ ntụgharị uche a na-akpọ dhyana.
5) Ntughari nkpu site n'Akwụkwọ Nsọ.
6) Na-anọdụ nwayọọ nwayọọ ma na-edozi uche iji nweta moksha.
Ihe omuma iji nweta Enlightenment
Ihe omuma bu ihe otutu ndi soro Sai Baba (na ndi Hindu) na-agbali inweta. Enlightenment bu ihe ime mmuo nke onye na-efe ofufe bu “onye ya na Chukwu” ma nwee ndu ebighi ebi mgbe o nwuru. Iji nweta Enlightenment, onye na-eso ụzọ ga-enwerịrị okwukwe dị nsọ ma hapụ ọrụ Guru; duru uche ya niile, mmetụta ya na omume ya niile bịakwute Chineke; o nweghizi ike iche onwe ya dika onye ma obu chee ugwo olu ya; na-eme omume dị ka ọ bụ kpam kpam ngwangwa na amara nke Chineke; ma nyefee ihe onwunwe niile ma bie ogbenye ogbenye. Sai Baba n'onwe ya na-arịọ nri maka nri oge ụfọdụ ma na-ebi n'ụlọ obibi ochie na India.
Ihe ọmụma banyere Chineke ma ọ bụ okpukpe bụ uru kasị mkpa mmadụ pụrụ inwe. Mmadu apughi iburu onye maara ihe site na imata ihe omuma dika sayensi kama o puru ime ihe site na igu akwukwo nso ma soro ya. Imata Ihe omuma na ntinye nye Chineke bu ihe omuma kachasi. Anụ ahụ na ahụ mmadụ bụ ihe efu; obu ak onuche ha di ebighebi nke di nkpa ma oburu na ha duzie ya n'ebe Chineke no, echiche ha na omume ha gabu ihe di nma. N'ezie, Sai Baba na-agba ndị mmadụ ume ka ha nyere ndị ọzọ aka karịa naanị ịnọdụ ala na ikpe ekpere. Sai Baba gbara ndi mmadu ume ka ha gbasoro omume oma na omume ubochi obula ma gbasoo ụkpụrụ nke eziokwu, omume kwesiri, udo, obi ojoo, obi ojoo, na omume oma. Ya mere, ndị na-eso ụzọ Sai Baba kwenyesiri ike n'ịrụ ọrụ ọma. (Rigoplouso, 1993: 285-290)
Nkwenkwe Sai Baba site na Omume
Sai Baba kwenyere na ime ihe dị mma na inyere ndị mmadụ aka dị mkpa karịa ịnọdụ ala na ito Chineke. Ndị niile na-eso ụzọ kwesịrị iji ịhụnanya, nlekọta, na achọghị ọdịmma onwe ha naanị ma wepụta onwe ha iji nyere ndị mmadụ aka. Sai Baba na-agba ume nke ukwuu inyere ndị na-enweghị enyemaka na ndị nọ ná mkpa gburugburu ụwa aka. Ọ na-etinyekarị ọrụ ya na India mana ọ gara Africa ịrụ ọrụ. O mepeela ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọgwụ, wee nye aka ibuga nri na mmiri nye ndị nọ ná mkpa na India. O mechaala ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ a na-apụghị ịgụta ọnụ na ọtụtụ ọrụ obodo maka India na agụmakwụkwọ, ahụike, na ịkụziri ndị mmadụ Sai Baba okpukpe. O nwekwara ashram, ihe mgbagwoju anya maka ịkwalite ọmụmụ ihe na agụmakwụkwọ okpukpe. O kwenyeghi n'inweta otuto ma ọ bụ otuto maka ọrụ ya. Ebumnuche ya kachasị ibu bụ imepụta mgbanwe ime mmụọ n'ime nwoke ọ bụla n'ụwa niile ikwere na Chineke. Ọ chọrọ iwu obodo ụwa dabere na udo na ịhụnanya ebe ndị mmadụ na-enyere ibe ha aka site na-arụkọ ọrụ ọnụ. Chineke ga-abu onye jikoro mmadu nile n’uwa n’otu “ezinulo”. (Robinson, 1976: 138) Taa, ụlọ ọrụ niile dị na mba 137 na-arụ ọrụ iji kwalite okpukpe na ịrụ ọrụ ọma.
Ọrụ ebube Sai Baba
Ebe ọ bụ na Sai Baba na-azọrọ na ọ bụ nlọghachi, ọ pụkwara ịrụ ụfọdụ ihe iji gosi na ya bụ Chineke. Ọ nwere ike ịkpọlite ​​ndị nwụrụ anwụ, mepụta ihe ọla edo n'aka ya, gbakee site n'ọrịa ndị dị oké njọ na nsị na-egbu egbu, ma gwọọ ndị na-arịa ọrịa. Ndị akaebe okpukpe na-ekwu ihe ndị ọzọ a kapịrị ọnụ dị ka ọ na-agbanwe mmiri n'ime mmanụ, na-ehi ụra n'elu ihe ndọtị nke eri na-adị n'elu ụlọ, ma na-eme ka ego dị nro site n'ikwu okwu. Sai Baba na-ekwu na mkpụrụ obi nke mbụ Sai Baba na-enyere ya aka ime ihe ndị a; echiche ndị a na omume ndị a bụ akụkụ nke omenala Hindi mbụ. (Narasimhaswamiji, 1966: 48)
Yabụ, ndị otu Sai Baba abụghị naanị otu okpukperechi mana ha na-erite uru ụwa site n'ọrụ ebere ha. Ọ bụ ịrọ òtù na-apụ apụ ma na -ekere òkè dabere na ofufe, nkwenye, na ịhụnanya. Nrara ha raara onwe ha nye Chineke na-akpali ha ije ozi. Dị ka Sathya Sai Baba si kwuo, “e nwere nanị otu okpukpe, okpukpe nke ịhụnanya. Naanị otu asụsụ bụ asụsụ nke obi. Enwere otu agbụrụ, agbụrụ nke mmadụ. E nwere nanị otu Chineke, Ọ nọkwa ebe niile. ”
Okwu nke oge
Enweela ọtụtụ akụkọ na-egosi na azọrọ Sai Baba na ya nwere ike ịme anwansi bụ ụgha. Kọmitii maka Nchọpụta nke Ekwu nke Paranormal na vidiyo ya gosipụtara na ha bụ aghụghọ anwansi doro anya.
Hardgrove, Anne. 1994. "Ndụ na nkuzi nke Sai Baba ma ọ bụ Shirdi." Akwụkwọ akụkọ nke Asia Studies. Nọvemba p. 1306.
Kamath, MV, na VB Kher. 1991. Sai Baba nke Shirdi. Bombay: Jaico Publishing House.
Kirkland, R. 1997. “Okpukpe ndị India na-eme eme.” Akwụkwọ akụkọ nke American Academy of Religion. 65 peeji nke 230-234.
Melton, J. Gordon. 1996. Encyclopedia nke American Religions. Detroit: Gale. p. 868.
Myers, Helen. 1994. "Sogba Na-abụ :bụ: Ọchịchị nke Revitalization na Trinidad." American Ethnologist. Nọvemba p. 1099.
Narasimhaswamiji, HH 1966. Ahụmahụ nke ndị na-efe ofufe nke Sri Sai Baba. Mylapore: India niile Sama Samaj.
Rigopoulos, Antonio. 1993. Ndụ na Ihe Omume nke Sai Baba nke Shirdi. New York: University University of New York.
Ruhela, SP, na Duane Robinson. 1976. Sai Baba na ozi ya. Delhi: Vikas na-ekwusara Ụlọ Pvt Ltd.
Ozi mkpọtụrụ :
Oge Nkwụsị, 1997